Cimiladu waxay qeexaysaa khaladaadka caadiga ah ee SEO iyo suuq-geynta internetka
Suuqgeynta Macmiilku waa qaab-dhismeed suuq-geyn oo muhiim ah oo leh internetka noqdaan kuwo baahsan oo soo maray sanadihii la soo dhaafay. Ganacsi kasta oo ka dambeeya websaydhka ama habka online-ka ah ayaa adeegsanaya suuq-geynta online sida midkoodxeeladaha ugu fiican. Ururo badan oo isku darsaday suuq-geynta iyo suuq-geynta internetka ayaa aad uga faa'iideystey awooddooda.Suuqgeynta internetka waxay noqon kartaa miino dahab ah haddii loo habeeyay si habboon. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto hab toos ah ama tilmaamo ah sida ugu badanka baxsan. Natiijo ahaan, waa waajib saaran xirfadlayaasha SEO iyo kuwa suuqa internetka si ay u ogaadaan nooca xeeladaha iyo kuwa ay yihiin ma sameynayo
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,Artem Abgarian wuxuu qeexayaa khaladaadka caamka ah ee ganacsigu sameynayo inta uu isku dayo inuu isku xiro SEO iyo suuq-geynta internetka.
1. Ku guuldareysiga in uu helo dib u eegis tayo leh
Waa lagama-maarmaan in lagu daro ololaha istiraatiijiga ah ee isku-xirnaanta dhismaha Googlewuxuu siinayaa xiriirada ugu muhiimsan. Backlinks ayaa sidoo kale bixisa tareeno tayo leh oo ka yimaada boggag kale oo si tartiib ah u beddelaya goobahakuwaas oo ku lug leh istaraatiijiyooyin kale oo lacagbixinta. Tusaale ahaan, dib u eegistu waxay u dhaqmaan sida goobahaaga. Natiijo ahaan, badeeco duluc ah waa in diirada la saaraa dhismaha isku xirka sida algorithm search engine waxay kuxirantahay iyaga liiska.
2. Ku guuldareysiga in uu lahaado istiraatiijiga mawduuca ku jira
Mashiinno raadin ayaa kuxusin doona website sida tayada content. Qaar badan oo ka mid ah suuqyadaa ayaa ku dhacaya meelo badan oo ka mid ah qalabyada otomaatiga ah ee SEO-yada in mararka qaar liita. Tusaale ahaan, xeeladaha sida isdhaafka maqaalada iyo walxaha muhiimka ah ee loo yaqaan 'keywords' inta badan waxay sameeyaan shabakadaha shabakadaha Google. Tayada maadooyinka, maqaallada iyo calaamadaha bulshadawaa qaar ka mid ah siyaabaha ay Google ku gaarto bogga. Way fiican tahay inaad isticmaasho naxwaha saxda ah, cinwaano hoose iyo waxyaabo aad u fiican oo mawduuc ka hadlaya si ku filan..
3. Uma siin wakhti ku filan
Qiimaynta baayacmushtarka ayaa ah mid aad u kacsan waxayna si sahlan u soo geli kartaa hoos u dhigida jagada boggaaga. Bacdamaa wax ku ool ah ayaa ah geedi socodka wakhti dheer, maaha hal mar. Dad badan oo ku guuleystey suuqgaynta internetka ayaa ku xiran hadafyada iyo istaraatejiyada muddada dheer ah muddada gaaban.
4. Uma ogolaanayno miisaaniyad ku filan ololaha ololaha
SEO waa inuu u baahan yahay miisaaniyadda miisaaniyadda ee dhinacyada kala duwansi ay u shaqeeyaan. Xaalado badan, suuqyada macaamiishu waxay hoos u dhaceen qalabyada otomaatiga ee SEO taas oo inta badan dhacdey ma siinayo waxa ay yihiinballanqaad. Mid waa inuu isticmaalaa lacag ku filan oo loogu talagalay cilmi-baaris ku filan oo ku filan, martigelinta, shaqaaleynta qorayaasha macaamiisha ah iyo suuqa kala iibsiga. Shabakad wanaagsanwuxuu u weynaan doonaa dhismaha sawirka astaanta ah iyada oo loo marayo boosteejada martida, xiriir wanaagsan oo isdaba-joog ah iyo sidoo kale suuq-geynta warbaahinta bulshada.
5. Ma qaybinaynin shaqada culeyska
Marka aad sameyneyso suuq-geynta internetka, waxaa jira shaqooyin badan oo muhiim ahwaxay u baahan yihiin heer sare oo xirfadeed iyo shaqo adag. Sidaa awgeed, qabashada hawlahaas oo dhan kali maaha kaliya inay yareeyaan tayada shaqadalaakiin sidoo kale hoos u dhig wax-ku-oolnimada xeeladaha SEO. Mid ka mid ah si loo gaadho habka ugu wanaagsan ee SEO-ga, koox ka mid ah khibrad sare lehxirfadlayaashu waxay u baahan yihiin in ay u shaqeeyaan si wadajir ah. Tusaale ahaan, mid ayaa qori kara qoraallada freelance ee bogagga internetka sida Dotwriter si ay u abuuraan contentbloggaaga. Halbeeg kale, mid ayaa shaqaaleysiin kara suuqgeynta warbaahinta bulshada
SEO waa geedi socod adag oo laga yaabo inuu ubaahdo heer aad u sareeya ixtiraamka ir. Sida kor ku xusan, dhowr arrimood ayaa loo isticmaalay si SEO loogu guuleysto. Si kastaba ha ahaatee, dhaqanka xun iyo farsamooyinka ayaa keenaya khaladaadka waawayn, kuwaas oo ku dhex jira suuqyadu waxay si gaar ah uga dhigayaan dhimista SEO-ga. Mararka qaar, ka baxsan qalabyada asaasiga ah ee asaasiga ah, suuqyaduhu waa inay shaqaaleeyaan La-taliyayaal SEO ama khabiiro si ay u helaan hanuunin ku saabsan guuritaanka ku habboon si ay u sameeyaan hawl kasta oo SEO ah. Dhamaan qaladaadahan oo dhan waa kuwo halis ah, laakiin qof kastasamaynta SEO for websiteyada waa inay ahaadaan kuwo iska cad Source .